नेपाली क्रिकेटका ‘लेजेन्ड’ हुन्, शक्ति गौचन । उनको धेरै इच्छामध्ये एउटा थियो, नेपालका लागि वान डे क्रिकेट खेल्ने । उनले त्यो इच्छा पूरा पनि गरे, नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको सिरिजमा । लगत्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास पनि लिए । यो त विश्व क्रिकेटका लागि आफैंमा एउटा अनौठो संयोग हो । डेब्युलगत्तै सन्यासको ।
जति बेलादेखि नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तहल्का मच्चाउन सुरु गरेको थियो, त्यो समयका खेलाडी हुन्, बायाँहाते स्पिनर गौचन । उनकै दुई चेलाले नेपालका लागि वान डे क्रिकेटमा डेब्यु गरेपछि उनी फेरि चर्चा आएका छन् । आईसीसी क्रिकेट वल्र्ड कप लिग–टुअन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज भर्खरै सकिएको छ । त्यस सिरिजमा सबैको नजरमा पर्न सफल युवा खेलाडी हुन्– स्पिनर शुसन भारी, अनि अलराउन्डर कुशल मल्ल । शक्तिले खेलेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि उनकै चेला वान डे क्रिकेट खेल्ने भए । र, यो हो– नेपाली क्रिकेटमा सुरु भएको पुस्ता हस्तान्तरणको संकेत ।
शक्तिले लगभग डेढ दशक सक्रिय खेलाडीका रूपमा नेपाली क्रिकेटमा बिताए । जति बेला खेलाडीका रूपमा सक्रिय थिए, उनको प्रशिक्षकको जीवन पनि सुरु भइसकेको थियो, समानान्तर रूपमा । उनले आफ्नै घर भैरहवामा एकेडेमी स्थापना गरेको पनि लामै समय भइसकेको छ । अब त यस एकेडेमीबाट राम्रा खेलाडी निस्कने दिन पनि सुरु भइसकेको छ र यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण शुसन र कुशल हुन् । यी दुई युवा खेलाडीको बाक्लो चर्चा चल्दा शक्ति कसरी पो छुट्न सक्छन् र ?
आफ्नो डेब्यु र अन्तिम दुवै खेलपछि उनले भनेका थिए, अब पालो नयाँ पुस्ताकै हो । हुन पनि अबको केही समयमा नेपाली क्रिकेट पूर्णत: नयाँ पुस्तामा जानेछ । उनीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, नेपालको वान डे क्रिकेट टिमको मान्यतालाई टिकाइरहने । त्यसकै एउटा पाइलाका रूपमा रहेको छ, यो सिरिज । त्यसको पहिलो खेलमा नेपाल र ओमान भिडेका थिए र त्यसमा डेब्युको अवसर पाए शुसनले, अनि यसक्रममा उनले सबैको मन पनि जिते ।
त्यो खेलमा नेपाल पराजित रह्यो, तर शुसनको खेलले धेरैको मन जित्यो । त्यस खेलमा ओमानले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो र उनले पूरा १० ओभरमा १४ रन मात्र खर्चे र एक ओभर मेडन पनि राखे । यसक्रममा उनले तीन विकेट लिए । नेपाली बलमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली उनकै प्रदर्शन रह्यो । जहाँ करणले चार विकेट त लिए तर महँगा सावित भए, त्यहीं शुसनले निकै कन्जुस्याइँपूर्ण बलिङ प्रदर्शन गरे ।
नेपालले प्रयोग गरेका छ बलरमध्ये उनी नै सबैभन्दा बढी किफायती रहे । पछि उनले ब्याटबाट नेपालका लागि ८ रनको योगदान दिए । यो उनका लागि स्वप्निल डेब्यु नै रह्यो । उनको यो प्रदर्शन कुनै अर्थमा संयोग मात्र थिएन । अमेरिकाविरुद्ध प्राप्त दोस्रो खेलको जितमा पनि शुसन बलबाट उत्तिकै चम्के । उनले १० ओभरमा फेरि एकपल्ट एक मेडन राखे र ४३ रन खर्चे । यसबीच उनी फेरि एकपल्ट आफ्नो स्लो लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बलिङको मद्दतले तीन विकेट लिन सफल रहे ।
यही खेलमा कुशलले पनि डेब्युको अवसर पाए र पक्का अलराउन्डरको छवि प्रस्तुत गर्न सक्षम रहे । सुरुमा उनले ब्याटबाट ५० रन बनाए, त्यो पनि खालि ५१ रनमै । यसक्रममा उनी बने, नेपालका लागि सर्वाधिक कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने ब्याट्सम्यान । त्यसमाथि उनी नेपालका लागि वान डे क्रिकेटमा डेब्यु गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी पनि बने, १५ वर्ष ३ सय ४० दिनमा । यसअघि यो कीर्तिमान रोहितकुमार पौडेलको नाममा थियो ।
कुशलले बनाएको त्यो अर्धशतक विशेष पनि रह्यो, किनभने जति बेला उनी क्रिकेटमा उत्रेका थिए, नेपालको स्थिति राम्रो थिएन । अझ दयनीय भन्दा हुन्छ । नेपालले ४९ रन मात्र बनाउँदा ५ विकेट गुमाइसकेको थियो । लागिरहेको थियो, नेपाल निकै कमजोर स्कोरमा सीमित हुनेछ, तर उनले अनुभवी विनोद भण्डारीसँग मिलेर ८४ रनको ठोस साझेदारी गरे । यसैको मद्दतले नेपालले १ सय ९० रनको स्कोर खडा गर्न सक्यो र यो नै अमेरिकामाथि नेपालको जितको आधार बन्यो ।
पछि उनले अमेरिकाविरुद्ध बलिङ गर्दा पनि आफूलाई उत्तिकै प्रभावशाली सावित गरे । उनले पूरा १० ओभरको बलिङ अवसर पाए र त्यसमा एक विकेट पनि लिए । उनको डेब्यु पनि उत्तिकै स्वप्निल रह्यो । आफ्नो प्रदर्शनलाई लिएर कुशल खुसी भने उत्तिकै थिए, तर त्यसलाई शब्दमा बयान गर्ने बानी भने उनले बनाइसकेका रहनेछन् । मिडियाको सामना गर्दा अधिकांश समय उनी हाँसेर नै बसे । खासमा यो हाँसोमा उनको उमेर पनि लुकेको थियो ।
बल्लतल्ल उनले भने, नेपालका लागि खेल्ने सपना थियो, अब त्यो पूरा भएको छ । अब भनिरहनु पर्दैन, यी दुई खेलाडीको प्रदर्शनमा सबैभन्दा खुसी कोही थिए भने ती उनै गुरु शक्ति थिए । नहुन् पनि किन र ? यसबारे मिडियामा आएको उनको प्रतिक्रिया भने गज्जबले परिपक्व थियो । शक्तिका अनुसार शुसन र कुशलले प्राप्त गरेको यो अवसर केही दिन र वर्षको मेहनतले सम्भव भएको होइन । यसका लागि उनीहरूले लामो समय परिश्रम गरेका छन् । शुसनले त खेल्न थालेको पनि १२ वर्ष भयो, कुशलले क्रिकेटमा बिताएको समय भने त्यसको आधा ।